मुम्बईलाई कप्तान रोहितको चिन्ता ! | Hamro Khelkud
मुम्बईलाई कप्तान रोहितको चिन्ता !
एजेन्सी – ईन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को २४ औं खेलमा आज किंग्स इलाभेन पन्जाब र मुम्बई इन्डियन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका ८ : १५ देखी मुम्बईको घरेलु मैदान वानखडेमा हुनेछ ।
यसअघि पन्जाबको घरेलु मैदानमा मुम्बई ८ विकेटले पराजित भएको थियो । पन्जाब पाँचौ जित निकाल्दै प्लेअफ समिकरण बलियो बनाउने सोचमा छ । मुम्बईलाई पनि अघिल्लो चरणको यात्रा बलियो बनाउन आजको खेल जित्नुपर्ने दवाव छ । पन्जाव ६ खेलमा ४ मा जित र २ मा हारका साथ ८ अंक जोड्दै अंक तालिकामा तेस्रो रहँदा ५ खेलमा ३ मा जित र २ मा हारका साथ मुम्बई अंक तालिकामा पाँचौ स्थानमा छ ।
मुम्बईका कप्तान रोहित शर्माले आशा गरेअनुसार प्रर्दशन गर्न सकिरहेका छैनन् । रोहितले जारी आईपीएलमा क्रमश : १४, ४८, ३२, ११ र १३ रनमा आउट भएका छन् । मुम्बईका कप्तान र शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यान रोहित चल्न नसक्दा अन्य ब्याट्सम्यानमा पनि केहि दवाव परेको देखिन्छ ।
मुम्बईका क्विन्टन डी कक, सूर्यकुमार यादवले औसत प्रर्दशन र हार्दिक पान्ड्याले उत्कृष्ट फिनिसिङ गर्दै आएका छन् । त्यस्तै हैदरावादविरुद्ध डेब्यू खेलमै ६ विकेट लिदै कीर्तिमान बनाएका अल्जारी जोशेफ, जसप्रित बुमराह,र क्रुनाल पान्ड्या बलिङका मुख्य हतियार हुन् ।
पन्जाबले पछिल्लो खेलहरुमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरिरहेको छ । ओपनर के एल राहुलले ६ खेलमा ३ अर्धशतक प्रहार गर्दै ले देखाएका छन् । त्यस्तै मयंक अग्रवालले पनि औसत प्रर्दशन गर्दा स्याम करनले अलराउन्ड प्रदर्शन गर्दा रविचन्द्र आश्विन, मुजिव उर रहमान र मोहम्मद शामीले निरन्तर विकेट लिइरहेका छन् ।